November 26, 2019 - ThutaSone
ငယ်စဉ်ကတည်းကအမေရော အဖေရော အဖွားပါ သေဆုံးသွားလို့​တစ်ယောက်ထဲ ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ၁၀ နှစ်ကလေး
November 26, 2019 ThutaSone 0
ဘဝမှာ ဆွေမျိုးမိဘမရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်ဖို့ ဆိုတာ တကယ်တော့မလွယ်ပါဘူး…..ဒါပေမဲ့ ခုပြောပြမဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးထဲက အသက် ၁၀ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်ဟာ တစ်ယောက်တည်းဘဝကို ရပ်တည်ဖြတ်သန်းနေရတာပါ….ငယ်စဉ်ကတည်းက အမေဖြစ်သူက ဆုံးပါးသွားတာဖြစ်ပြီး အဖေကလည်း ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတစ်ယောက်အဖြစ် အဝေးမှာ အလုပ်လုပ်နေရသူပါ….. ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘနဲ့ခွဲနေရတဲ့ Dang Van Khuyen လေးဟာ […]
ငွေကို ရေလိုသုံးနိုင်ပြီး အလျှံပယ်လှူဒါန်းနိုင်တဲ့ထိ လာဘ်ဝင်စေတဲ့ ဂါထာတော်ကြီး …..
ဂါထာမန္တန်တွေဆိုတာ တကယ်အစွမ်းထက်ပါတယ်…ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သူရဲ့ သီလရယ်…ယုံကြည်သက်ဝင်မှုရယ် ပေါင်းလိုက်ရင် တကယ့်ကို အကျိုးရှိစေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ခုပြောပြပေးမယ့် ဂါထာတော်ကြီးကတော့ ငွေကြေးအဆင်မပြေဖြစ်နေသူတွေအတွက် ငွေကို ရေလိုသုံးနိုင်ရုံမက အလျှံပယ်လှူဒါန်းနိုင်တဲ့အထိ ချမ်းသာလာစေမယ့် ကျင့်စဉ်ဂါထာတော်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. ဒီဂါထာကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရမယ့် နည်းလေးကိုလည်း အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်…. “၂၄ ရက် အဓိဌာန်….နှင်းဆီပန်း ၂၄ပွင့်…ဆီမီး၂၄တိုင်…တံခွန် […]
ကနေဒါစင်တာဖောင်ဒေးရှင်းမှ ပညာရည်ချွန်ဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ မေသက်ထားဆွေ
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ကလေးတွေကို ကနေဒါစင်တာဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဂုဏ်ပြုလေ့ရှိပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ သနပ်ပင်ကျေးရွာမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ကနေဒါစင်တာဖောင်ဒေးရှင်းပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲမှာ မေသက်ထားဆွေလည်း ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရပါတယ်။ မေသက်ထားဆွေက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ်မှာ မြန်မာစာ၊ ဇီဝဗေဒဂုဏ်ထူး ၂ဘာသာနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မေသက်ထားဆွေက ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာ တေးသီချင်းများနဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့သလို ဆရာတော်ကိုလည်း ရတုတေးထပ်နဲ့ ပူဇော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Unicode […]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဘူဆန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ် မြနန္ဒာသီချင်းနဲ့ ကြက်သီးထစရာကောင်းအောင် ကြိုဆိုခဲ့ကြတဲ့ video ရုပ်သံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဘူဆန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ် မြနန္ဒာသီချင်းနဲ့ ကြက်သီးထစရာကောင်းအောင် ကြိုဆိုခဲ့ကြတဲ့ video ရုပ်သံ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေး သမိုင်းမှာ နာမည်ကျော်ကြားပြီး လူထုအားပေးမှု တခဲနက်ရရှိထားခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တာကြောင့် နိုင်ငံတကာမှ လေးစားရသူဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှ ပေးအပ်သော […]
အဖွားကတော့ ပျော်နေပါတယ်…ပုဂံကို ဘုရားဖူးသွားချင်လို့ ပန်းရောင်းရင်း ပိုက်ဆံစုနေတဲ့ အဖွားကို ကုသိုလ်ပြုပေးခဲ့ကြပြီး
ပုဂံကို ဘုရားဖူးသွားချင်လို့ ပန်းရောင်းရင်း ပိုက်ဆံစုနေတဲ့ အဖွားကို ကုသိုလ်ပြုပေးခဲ့ကြပြီး 26.11.2019 မှာ ကိုမွန်မြတ် မှပုဂံ ဘုရားဖူးချင်တဲ့ အဖွားကို စားရိတ်ငြိမ်း အခမဲ့ ဘုရားဖူးလိုက်ပို့ရင်းကျွန်တော်တို့မိသားစုက တွေ့ခွင့် ကုသိုလ်ယူခွင့်ရခဲ့တာပါ အဖွားဟာ မုံရွာမြို့ ဒေါနခြံမှာ တစ်ယောက်ထဲနေတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။ ပုဂံဘုရားဖူးချင်လွန်းလို့ မနက် (၁) […]
မိမိ၏သားသမီးများကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပါဗျာ….ဆော့ကစားနေရင်းပျောက်သွားတဲ့ ၆ နှစ်သမီးလေး အဝတ်အစားမပါဘဲ အလောင်းသာ ပြန်တွေ့
ဆော့ကစားနေရင်းပျောက်သွားတဲ့ ၆ နှစ်သမီးလေး ရဲ့အလောင်းကို အဝတ်အစားမပါဘဲ ပြန်တွေ့ မိမိ၏သားသမီးများကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပါဗျာ…. ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊ မန်သဲအုပ်စု၊ ကုန်းကြီးရွာမှ ဦးထွန်းဝေ + ဒေါ်လှသန်းရီ တို့၏သမီး မကြယ်ဇင်မိုး(၆)နှစ်သည် (18-11-2019)ရက်နေ့ ညနေအချိန်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ဆော့ကစားနေရာမှ အိမ်ပြန်ရောက်မလာတာကို ည(၇)နာရီခန့်ရောက်မှ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေသူ မကြယ်ဇင်မိုး(၆)နှစ် ရုပ်အလောင်း(အဝတ်အစား […]
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ဒီရက်ပိုင်း အထူး သတိထားကြပါ
အခုတစ်လော မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာ မိန်းကလေးတွေ ပျောက်ဆုံးတဲ့ သတင်းက နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ကလည်း လားရှိုးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ ၁၃ နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတစ်ယောက် ပျောက်ဆုံးသွားလို့ အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ကနေတစ်ဆင့် ရှာဖွေပေးကြဖို့ အကူအညီတောင်းခဲ့ရာကနေ ဘုရားကြီးမှာ တွေ့တဲ့အကြောင်းသိရပြီး ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သိရသလောက်တော့ သူ့ကို ဦးလေးတစ်ယောက်ကခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ ကားသွားငှားမယ်ခဏစောင့်ဆိုပြီးတော့ အခြေအနေမဟန်မှန်းသိတော့လစ်ပြေးသွားတာပါ။ မြို့ခံရပ်မိရပ်ဖနဲ့ ထမင်းဆိုင်က […]
ဒီ 2020 နှစ် ထဲမှာ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲမည့် နေ့ဖွားများ
ကြာသပတေး အရာရာ ထိပ်ဆုံးရောက် အောင်မြင်မယ့်နှစ် ဖြစ်လတ္တံ အချစ်ရေးကိစ္စတွင် ကိုယ့်ထက်သာမယ့်သူ သို့ ကိုယ့်ထက်ကြီးမယ့်သူနှင့် ဖူးစာဆုံရလတ္တံ နှလုံးသားနှင့် ဦးနှောက်ပေါင်းစပ်ကာ ကြင်ဖက်ရွေးလတ္တံ ငွေဝင်ကောင်းလတ္တံ ချေးထားငွေများပြန်ရလတ္တံ မိခင်နှင့် ဝေးနေကြသူများ ပြန်ဆုံရလတ္တံ မိခင်၏ ကျန်းမာရေးကို စိုးရိမ်နေကြသူများအထူးစိုးရိမ်ဖွယ် မရှိဖြစ်လတ္တံ အထက်အရာရှိ ဆရာသမား ပူဇော်မစ […]
လူအများစုရဲ့သဘာဝ ၊ အများစုရယ် မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ၊“နတ် ကိုးကွယ်မှု အားသန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်”တွေကဘုရားပန်းသာ ညှိုးချင် ညှိုးပါစေ။နတ်ပန်းတော့ အညှိုးမခံနိုင်ဘူး။ ဘုရားစင်မှာ ဆွမ်းခဲဖွယ် ချိုချဉ်ရသာ မရှိရင် သာနေမယ်။ နတ်ရှေ့မှာ အုန်းသီးဆို လည်း အလုံးလိုက်၊ ငှက်ပျောသီးဆိုလည်း အဖီးလိုက် ယောဂီတို့ အိမ်တွင်းရေး မသာယာချင် ဘူးလားသာယာချင်တယ် […]
ရုပ်ရှင်တကားကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားတဲ့ ကမ္ဘာကျော်မင်းသားကြီး Keanu Reeves ….
Little Buddha မင်းသား Keanu Reeves ကရတနာမြတ်သုံးပါးအပေါ် ဤသို့ ရှုမြင်သုံးသပ်ခံယူပါတယ်..။ မြတ်ဗုဒ္ဓ ? ” မြတ်ဗုဒ္ဓက ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့တူတယ် ”” ရောဂါအခြေအနေနဲ့ အကြောင်းတရားကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးဘယ်လိုကုသရမလဲဆိုတာကိုလည်း နားလည်ပြီး သင်ပေးတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့တူတယ် ” ။ ဓမ္မ တရား ? […]